Sweets yevana - Utano hwakanaka asi huri humwe hunonaka
Chii chingaitwa kuti tiputse tsika dzoupenyu?
Mamwe mazano ekutapira munching asingakanganwi
Vana vanoda masipi. Izvo zvakachengeteka saAmeni muchechi. Uye kusiyana nezvakaitika kare, ivo vanoita sevanokwanisa kuwana zvishoma kudarika kwose kwose. Izvi zvinotanga paziso revana pachitoro chekutengesa uye rinopfuurira pamapoka ekuberekwa kwevana nehoko rekatekete, windbags uye smarties.
Kunyangwe isu tiri tose tava kucheneswa pamusoro pehuwandu hwehuga huri mumuviri, kunyanya kudarika kuri dambudziko rezera redu, rinoenderera mberi muvana vedu.
Hazvina maturo mumakore achangopfuura mazwi akanzwika kuti chizvarwa chevana vekuchikoro chemazuva ano vanofa mberi kwechazvarwa chevabereki vavo nekuda kwekushaya zvokudya zvakashata. Pane imwe nguva apo mamiriyoni evanhu ari nenzara uye kufa kwekushaya zvokudya zvinovaka muviri.
Matafura eShuga uye akakwidza mimwe yenzara
Iko kare muvana vechikoro chekuchechera vana vanoziviswa nezve shuga uye mafuta muzvokudya. Kwete zvese zvinotapira zvinotapira zvisingatambudzi kuuya kuuya semafuta, asiwowo zvakanyatsoiswa mumapuranga, mavara, anofungidzira vana vane utano hwakadai sezvibereko gnomes uye kiddie sausage.
Sei chikonzero chokuti vana nevakuru vadzoke pamitambo yekare uye vanosarudza kubata bhitoro yepamusoro kune yoghurt yemuviri nemichero itsva? Kune imwe, iyo ndiyo nguva chaiyo iyo. Bhocoti yakagadzirwa yakagadzirwa, chibereko chaunofanira kushambidza nekucheka kuti chichikurise mu yogurt.
Mukuwedzera, michero ine utano yakanyanya kudhura kudarika chokoti, iyo inowanzove yechipiri uye inoshanda sechinhu chisina maturo-gakava.
Sweet munching pasina kukanganwa mabasa nehutano hwakanaka. Munhu uyo ​​anoda kuve akanaka anotaridzika asina hanya naye - uye kunyange amniotic fluid inonaka inotapira. Asi iwe unogona sei kuchengetedza mararamiro ane utano hwakanaka munguva refu?
Heino migumisiro yevabereki vakabvunzwa. Hazvina kukwana kudzidzisa vana nguva nenguva kuti ingashanda sei. Utano hwakanaka hunogona kudzidziswa. Inotanga nefurafura yemubhedha.
Edza kushandiswa kushanda chiduku chekudya chishure mushure memazuva. Muzhizha, michero yemarudzi ese ndiyo inonzi hit. Saka unononoka pasi kuda kwemasipi uye panguva imwe chete unopa kuwedzerwa mavithamini, kunyange kana inofanirwa kuenda nokukurumidza masikati.
Shuga - zuva nezuva mutsva mutsva wakanaka
Usachinja mararamiro emhuri yako usiku hwose. Zvinoshungurudza semapikini mumvura. Tanga nechinhu chimwe uye uchengete kusvikira yava tsika. Pashure pacho, ita chimwe chinhu.
Iva nechokwadi kuti haufaniri kukunda, zvisinei iwe uchakurumidze kurasikirwa nechido chako chekudya kwakanaka. Kana iwe ukaedza zvishoma, vana vako vachazozivawo zvibereko zvinoshamisa, herbs uye ndiro.
Izvo zvinhu zvakawanda izvo mwana wako anozviziva, zvimwe zvisarudzo zvichange zvichizove nazvo pakupedza kudya kwavo pachavo pachavo. Usakanganwa kuti pane zvakawanda zvemiriwo izvo zvisikwa zvishoma zvinotapira. Nguruve, karoti uye zucchini zvinongova mienzaniso miviri.
Zvingwa zvinogona kuve nezvibereko kune mbeu kana nutam. Pano bhanana, peari, maonde kana apuro pane imwe nhete yekisiki yakakodzera.
Zvokudya zvinowedzera | Diet & Diet
Healthy Diet | Zvokudya utano